Home » Events/Fundraise » ၂၀၀၀ အဖွဲ့ သတင်း ( C-1 )
ကျမ ရဲ့ Program လေး တစ်ခု . ..
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x
ငွေပမာဏ သိပ်မများပေမဲ့ မိသားစု တစ်ခု ကို စားသောက်ဖို့ အဆင်ပြေစေမယ်..၊ ထမင်းငတ်ခြင်းဘေး က လွတ်စေမယ် ..ဆိုရင် .. . လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ကလေး မဟုတ်လား..ရှင် .. ။
ကျမမှာ လူ သိပ်မသိကြတဲ့၊ ပြီးတော့ သိပ်လည်း တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ program လေး တစ်ခုရှိပါတယ်..။ အဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေရင်း . ကုသိုလ် အမျှလည်း ဝေချင်တာပါ ..။
.အင်မတန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးပါ..အရင်းလည်းမဆုံးဘူးဆိုရင်တော့ နောက်လူတွေကိုဆက်ကူညီနိုင်….တာပေါ့ (ဒါတောင် ဦးပါရဲ့ ကြိမ်စာသင့်သောငွေငါးသိန်း ၀တ္ထုလေး သတိရဖြစ်အောင်ရသေးတယ် :)) )
အတိုးမဲ့ချေးပေးမယ့် အလှူ ရှင်ရှိတာတောင်၊
သူကြီး လက်သုံးစကား MBA မဟုတ်တောင် Business Administration ကို ပါ တွဲပြီး ပညာ ဒါန လုပ်ပေးသင့်မလားဘဲ။